Bal'ina murtaa'otattim URL akka walqabsiftu si'iif haayama, Saxaatoo irra ykn garee saxaatoowwan, Calqqeen maappii gartuu tokko ykn isaa ol.
Guulaalii - MaapiCalaqqee (baafata halqaraa wanta filatamee sana keessaalee)
Akaakuuwwan hotspotsii sadi fakkasuu ni dandeesa ; Rectaangiloota citaawwani fi rogadeewwan yeroo hotspotsii cuqaaftu , URL foddaa iyyaafataa keessaa baname ykn goodayyaa ifteeessitu. Akkasumas barruu kan yeroo haantuuttee kee boqachiiftu hotspotsii mula'ata
Calaqqee Maappii jiraataa MAAPPII-CERN, MAAPPII NCSA keessaa ykn dhangii faayilii Maappii Calaqqee Mula'annooUurjii SIP fe'a.
Maappii calaqqee MAP-CERN, MAP-NCSAkeessaa ykn dhangii faayilii Maappii Calaqqee Mula'annooUrjii SIP olkaa'a.
Rektaangulaawwaa hotspotii bakka saxatoo keessatti hakiftu fakkasa. Erga Teessoo fi Barruu hotspotii dhaaf galchuu dandeessee booda, ittaansuudhaan Goodayyaa bakka URL bantutti fili.
Bakka saxaatoo keessaatti harkistutti luulloo bakkee ho`aa fakkasi. Booda, bakkee ho`aatiif Teessoo fi Barruu galchuu dandeessa, itti aansuudhaan iddoo URL banuu barbaade Godayyaa fili.
Saxaatoo keessatti rogaddee hotspotii fakkasa. Sajoo kana cuqaasi, saxaatoo keessatti harkisi, ittaansuudhaan cinaa rogaddee tokko hiikuuf cuqaasi. Gara dhuuma cinaa ittaannuu kaa'uu barbaaddetti sochoosi, ittaansuudhaaancuqaasi. Hanga cinaa rogaddee mara kaaftuutti irra deebi'i. Yeroo xumuurte rogaddee cufuuf lama-cuqaasi. Erga Teessoo fi Barruu hotspotii dhaaf galchite ittaansuudhaan Goodayyaa bakka URL bannuubarbaaddee fili.
unka akka feetee rogaddee cuqaasi, bakka hotspotii kaasuu bakka feetee harkisuun , boca cuufuf gadhisi. Erga Teessoo fi Barruu hotspotiidhaaf galchiteen booda Goodayyaa bakka URL bannuu barbaaddee fili.
URL faayilii banuu barbaadde galchi , yeroo hotspotii filatamee cuqaastu. Yoo garaa korkodditti galmee waliin utaaluu barbaadde teessoo unka"faayilii:///galmee-maqaaa" ta'uu qaba.
Barruu agarsiisuu barbaadde yeroo haantuuttee bakkee ho`aa irraa iyyaafataa keessa qubatu galchi. Yoo barruun kamiyyuu hin saagamu ta`e, Teessoon agarsiisama.